Diyaarad ay raaci lahaayeen Saraakiil Imaaraat ah oo lagu xayiray Garoonka Boosaaso. – Xeernews24
Diyaarad ay raaci lahaayeen Saraakiil Imaaraat ah oo lagu xayiray Garoonka Boosaaso.
Sida aan Wararka ku helnay ciidamada amaanka garoonka Diyaaradaha magaalada Boosaaso ayaa xanibay diyaaradan kadib markii saraakiil raaci laheyd ay diideen in la baadho boorsooyin ay wateen.
WARARKA KALE WAXAY INTAA KU DARAYAAN
Saraakiil Milatari oo u dhashay Imaaraadka iyo Boorsooyin ay wateen ayaa ka dhoofay Garoonka Diyaarada Magaalada Boosaaso kaddib is faham waa dhexmaray Puntland iyo Imaaraadka.
Dowladda Imaaraadka ayaa maamulka Puntland ku amartay in ay iska diiddo go’aanka dowladda Federaalka ah ee Ciidamada ay tababartay Imaaraadka kula wareegeyso dowladda Federaalka ah,waxaana ay saraakiisha Imaaraadka la kulmeen mas’uuliyiinta Puntland kuwaas oo ka dalbaday in shirka Golaha wasiirrada ee Khamiistii la soo dhaafay ay Puntland ka sheegto go’aankeeda ka dhanka ah dowladda Federaalka ah.
Markii ay Khamiistii kulmeen Golaha Wasiirrada Puntland waxaa dhacday in Wasiirrada u codeeyay in la diido go’aanka Imaaraadka ay bateen,islamarkaana ay isku raaceen in ay ku mowqif yihiin Dowladda Federaalka ah oo todobaadkii hore sheegtay in ay la wareegeyso Ciidamada ay tababareen Imaaraadka.
Intaas kaddib Tababarayaasha Imaaraadka ayaa go’aan ku gaadhay in ay maanta isaga baxaan Puntland,waxaana maanta iyaga oo isku dayay in ay agabkooda kala dhoofaan Garoonka Boosaaso ka hor istaagay Ciidanka Amaanka Garoonka.
Markii ay timid Diyaaradda qaadi lahayd Saraakiisha Imaaraadka ayaa waxaa ay ciidamada dalbadeen in ay baadhaan buuq arrintaas ka dhashay ayaa sababay dib u dhac uu ku yimaado safarka hayeeshee ugu dambeyn la fasaxay saraakiishii iyo Boorsooyinkii ay wateen.
Puntland ayaa diidday in saraakiisha Imaaraadka ee tababarayay Ciidanka Badda Puntland ay qaataan Garaawida aan Rasaasta Karin ee Bulet Proof-ta loo yaqaan,Sanaadiiq Rasaas ah iyo Saanad kale oo Milatari,waxaana Markab ay Imaaraadka keensatay oo ay dooneysay in ay agabkaas ku qaadato uu wali ku suganyahay Xeebaha Puntland.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/Boosaasoo.jpg 150 218 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-14 18:02:352018-04-14 18:02:35Diyaarad ay raaci lahaayeen Saraakiil Imaaraat ah oo lagu xayiray Garoonka Boosaaso.
Yaa u sheege Cabdi Iley in Beesha Gabooye guur la,aani hayn ee maamulkiisa beelaysan... DAAWO:- Sababta Jabuuti U Noqotay Goob Millateri Oo Caalami Ah ( Xogta Dahsoon...